Asal ahaan dhammaan cuntooyinka iyo cabbitaannada way bannaan yihiin oo waa xalaal waxaan ahayn waxa laga soo reebay oo waxyaalaha xaaraanta ah ee dhibaatada u leh dadka ee waxyeelleynaya qofka caafimaadkiisa iyo debcigiisa iyo diintiisa, wuxuuna Allaah ugu manno sheegtay ddaka inuu u abuuray iyaga dhammaan waxa jira dhulka si ay ugu intifaacaan marka laga reebo waxa uu ka xaaraantinimeeyey, wuxuu yiri:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) (البقرة: 29).
“Waa Isaga Kan idiin abuuray waxa dhulka korkiisa ah oo dhan”. (Al-Baqarah: 29)
Dhammaan dhirta ay beeraan dadka ama ka soo qaataan geedaha ku yaal miyiga iyo keymaha iyo cowska iyo fidirka nooc ay ahaadaanba waa xalaal bannaan in la cuno, marka laga reebo waxa waxyeelleynaya oogada iyo caafimaadka ama waxyaalaha daboola caqliga sida khamriga iyo daroogooyinka, waxaana loo xaaraantinimeeyey dhibaatada ay leedahay darteed iyo qaadista caqliga.
Waxaa loola jeedaa cuntooyinka badda waxa aan ku noolaan karin waxaan ahayn badda, oo ku noolaanshahiisa berrigu yahay waxaaan caadi ahayn.
Halkan waxaa loola jeedaa badda biyaha badan, sidaas awgeed waxaa soo galaya webiyada iyo balliyada, iyo qeyrkood ee ah biyo badan.
Dhammaan cuntooyinkaa badda ha ahaadeen dhir ama xoolo la ugaadho iyagoo nool ama la helo iyagoo meyd ah cuniddeedu way bannaan tahay haddii aanaay dhibaato u lahayn caafimaadka.
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه) (المائدة: 96).
“Waxaa la idiin banneeyey ugaadha badda aad ugaarsataan iyo cunnaddeedaba” (Al-Maa’idah: 96)
Ugaadhna waa waxa la soo qaato isagoo nool, cuntada baddana waa waxa badda soo tuurto kaddib dhimashadiisa.
“Waxaa la idiin banneeyey ugaadha badda aad ugaarsataan iyo cunnadeedaba”
Waxaa u shardi ah cunitaanka xoolaha berriga labo shardi:
Inay yihiin xoolo ay bannaan tahay cuniddoodu.
In lagu soo ugaadho ama gowraco si sharci ah.
Waa maxay xoolaha aan bannaaneyn?
Asal ahaan dhammaan xoolaha waa xalaal marka laga soo reebo waxa loo hayo daliil xagga Qur’aanka iyo Sunnada ah oo xaaraantinimeynaya.
Waxyaalaha la xaraantinimeeyey xagga xoolaha waa:
Wax kasta oo mici leh oo ka mid ah dugaagga:
Waxaa loola jeedaa dhammaan xoolaha hilibka cuna ha ahaado mid weyn sida libaaxa iyo shabeelka ama mid yar sida yaanyaaurta iwm, waxaa sidoo kale ka mid ah eyga.
Wax walba oo ciddi leh oo ka mid ah shimbiraha:
waxaana loola jeedaa dhammaan shimbiraha cuna hilibka sida gorgorka iyo galleyrka iyo guumeysta, iwm.
Masaska iyo abeesooyinka iyo jiirarka:
Waa xaaraan in la cuno, waxaana nala amray in la dilo, Nabigu  wuxuu yiri: “Shan waa fallaago la dili karo haddaad xarman tahay iyo haddii kaleba: maska, tukaha leh midabyada kala duwan, jiirka iyo eyga dadka cunka ah iyo xadyada (Al-Bukhaari 3136, Muslim 1198)
Dhammaan cayayaanka laga helo berriga ma bannaana in la cuno, waayo lama gowrici karo, waxaana laga soo reebaa arrinkaa ayaxa, wuu bannaan yahay in la cuno, sida uu Nabigu  yiri: “Waxaa naloo banneeyey labo meyd: kalluunka iyo ayaxa” (Ibnu Maajah 3218)
Waa xayawaan xaaaraan fadaro ah xagga islaamka dhammaan qaybahiisa iyo xubnahiisa iyo waxa laga soo sameeyo sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)(سورة المائدة:3).
“Waxa la idinka xaaraantinimeeyay waa waxaa (xoolahaa) u dhinta iskood (gowrac la’aan), iyo dhiig, iyo hilib doofaar”. (Al-Maa’idah: 3), Rijazna macnahiisu waa najis.
Dameerka la dhaqdo.
Waa dameerka loo isticmaalo fuulidda iyo in wax lagu qaato.
Qofka Muslimka ah waa inuu iska hubiyo inay xalaal tahay cuntada markuu iibsanayo
Noocyada xoolaha bannaan:
Allaah waxa uu noo banneeyey ee ka mid ah xoolahan waa labo qaybood:
Qayb ku nool berriyada ee ka carara dadka, aan la qaban karin si loo gowraco:
Marka waxaa noo bannaan in lagu soo ugaadho si sharci ah.
Nooc aan didin ee la soo qaban karo:
kuma bannaana waxaan ahayn gowrac sharci ah.